Hijri (Xilli-tirsi) – Garanuug
Home / Abwaan / Hijri (Xilli-tirsi)
Tifaftireyaasha Abwaan October 1, 2016	Abwaan Leave a comment 7,229 Views
Xilli-tirsiga Hijriga loo yaqaanno ee Muslimiintu ay adeegsadaan waxa uu ka bilowdaa sannadkii uu Nebigu- sallal Laahu calayhi wasallam- u hijrooday Madiinah. Ereyga ‘hijri‘ waxa uu ka yimid hijrah.
Xilli-tirsiga hijriga ah waxaa dejiyey khaliifkii labaad ee Muslimiinta, Cumar ibnul Khaddaab- Alle ha ka raalli ahaado e-. Sababtana culumada taariikhdu waxa ay ku sheegaan in loo keenay dacwad ku saabsan dayn laba nin u dhaxaysay. Dacwadda waxaa dhaliyey jeeggii (cheque/check, الصك) ninka daynta leh loo qoray ayaa waxaa ku taalley in la bixinayo bisha Shacbaan. Cumar waxa uu weydiiyey Shacbaanta la iska rabaa midda ay tahay. “Ma ta sannadkan, mise tii ka horreeyey, mise Shacbaanta midka ka dambeeya?”. Ka dib waxa uu bilaabay in uu waxgaradkii isu keeno oo uu ka dalbo in la dejiyo taariikh dadku ku gartaan xilliga dayntoodii la baxinayo.
Dadkii qaar ka mid ah waxa ay soo jeediyeen in nidaamkii xilli-tirsiga ee Faarisiyiinta la qaato, laakiin looma bogin. Qaar kale ayaa iyaguna soo jeediyey in tii Roomaanka la qaato, taasna lama jeclaysanin. Waxaa kale oo la soo jeediyey in laga bilaabo dhalashadii Nebiga- sallal Laahu calayhi wasallam-, ama markii Nebinimada la siiyey. Cali ibnu Abii Daalib- Alle ha ka raalli ahaado e- iyo kuwo kale ayaa soo jeediyey in xilli-tirsiga Muslimiinta laga bilaabo xilligii uu Nebigu- sallal Laahu calayhi wasallam- Makkah ka baxay ee uu Madiinah u hijrooday, maxaa yeelay waxa ay ahayd dhacdo taariikhdeedii la hayo oo aan muran ka taagnayn. Aragtidaas ayaa uu Cumar jeclaystay waxa uuna amar ku bixiyey in hijradii laga bilaabo, markii la tiriyeyna xilligii ay joogeen waxa uu noqday sannadkii 16aad hijrada ka dib.
In kasta oo ay hijradu ahayd bishii Rabiicul Awwal, waxaa la qaatay in lagu sii socdo nidaamkii jirey ee sannadku ka bilaabanayey bisha Muxarram, si aan biluhu isu daba marin.
Hijradu waxa ay ahayd dhacdo kala-wareeg; waxaa ku dhammaaday xilligii ay Muslimiintu ku hoos noolaayeen taliskii Quraysheed ee madaxa kaga taagnaa, waxaana ka bilowday xilligii ay noqdeen ummad madax bannaan oo dawlad leh.
Tirada biluhu waa 12, sida Alle ku xusay Qur’aanka. Afar ka mid ah ayaa xurmad dheeraad ah leh; al-Ash-hur al-Xurum (الأشهر الحرم)/ Bilaha Xurmada leh. Habeen-tirsigu waxa uu ku salaysan yahay dayaxa cusub (dhalashada bisha). Sidaas awgeed, biluhu waxa ay u dhexeeyaan 29-30 maalmood, taas oo sannadka ka dhigta 354 maalmood, halka sannadka qorraxda ku salaysani ka yahay 364 maalmood iyo saacado.
bilaha xurmada leh calendar Cali ibnu Abii Daalib Cumar ibnul Khaddaab Hijrah hijri Hijro Madiinah Makkah muxarram sannad shuuraa talo taqwiim wada tashi xilli-tirsi	2016-10-01
Tags bilaha xurmada leh calendar Cali ibnu Abii Daalib Cumar ibnul Khaddaab Hijrah hijri Hijro Madiinah Makkah muxarram sannad shuuraa talo taqwiim wada tashi xilli-tirsi
Next Abuu Xaniifah
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ...